एप्पलको आईफोन आइडी कसरी खोल्नु - आईओएस - 2019
एप्पलको आईफोन आइडी कसरी खोल्नु
चलिरहेको औसत विधि एक सांख्यिकीय उपकरण हो जसको साथ तपाईं विभिन्न प्रकारका समस्याहरू समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी, यो प्राय: पूर्वानुमानमा प्रयोग गरिन्छ। एक्सेलमा, यो उपकरण पनि विभिन्न कार्यहरू समाधान गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। आउनुहोस् कि एक्सेलमा कसरी औसत औसत प्रयोग गरिन्छ।
औसत सार्नुको अनुप्रयोग
यस विधिको अर्थ यो हो कि यसका साथ त्यहाँ डेटा स्नोइङ्ग गरेर केहि निश्चित अवधिको लागि चयन गरिएको श्रृंखलाको निरपेक्ष गतिशील मानहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यो उपकरण आर्थिक गणना, भविष्यवाणी, स्टक एक्सचेंजमा व्यापारको प्रक्रियामा प्रयोग गरिन्छ। सांख्यिकीय डाटा प्रोसेसिंग को लागि सबै भन्दा शक्तिशाली उपकरण को सहायता संग एक्सेल मा चल औसत औसत विधि को उपयोग गर्न को लागि यो सबै भन्दा राम्रो छ विश्लेषण प्याकेज। यसको अतिरिक्त, यी उद्देश्यहरूका लागि तपाईले निर्मित इन एक्सेल प्रकार्य प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। AVERAGE.
विधि 1: विश्लेषण प्याकेज
विश्लेषण प्याकेज पूर्वनिर्धारित रूपमा असक्षम गरिएको एउटा एक्सेल एड-इन हो। यसैले, सबै भन्दा पहिले, यो सक्षम गर्न आवश्यक छ।
ट्याबमा सार्नुहोस् "फाइल"। वस्तुमा क्लिक गर्नुहोस्। "विकल्पहरू".
परिमिति सञ्झ्यालमा सुरू हुन्छ, खण्डमा जानुहोस् Add-ons। फिल्डमा विन्डोको तल्लोमा "व्यवस्थापन" परिमिति सेट हुनुपर्छ एक्सेल एड-इन। बटनमा क्लिक गर्नुहोस् "जानुहोस्".
हामी एड-अन सन्झ्यालमा पुग्छौँ। आइटम नजिकको टिक सेट गर्नुहोस् "विश्लेषण प्याकेज" र बटनमा क्लिक गर्नुहोस् "ठीक".
यस कार्य प्याकेज पछि "डेटा विश्लेषण" सक्रिय, र यो बटन ट्याबमा रिबनमा देखा पर्यो "डेटा".
अब हामी कसरी सिधा तरिकाले प्याकेजको क्षमताहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हेरौं। डेटा विश्लेषण चलिरहेको औसत विधिमा काम गर्न। हामीलाई अघिल्लो 11 अवधिहरूमा फर्मको आयमा जानकारीको आधारमा, बृहत्वार्षिक महिनाको लागि एक भविष्यवाणी बनाउनुहोस्। यो गर्नका लागि, हामी तालिका र डेटा र उपकरणको साथ भरिएको छ। विश्लेषण प्याकेज.
ट्याबमा जानुहोस् "डेटा" र बटनमा क्लिक गर्नुहोस् "डेटा विश्लेषण"जुन ब्लकमा उपकरणको टेपमा राखिएको छ "विश्लेषण".
उपकरणहरू उपलब्ध छन् सूची विश्लेषण प्याकेज। हामी तिनीहरूलाई नाम चयन गर्छौं "औसत सारिँदै" र बटनमा क्लिक गर्नुहोस् "ठीक".
डेटा भविष्य सञ्झ्याल औसत भविष्यवाणी सार्नको लागि सुरू भएको छ।
फिल्डमा "इनपुट अन्तराल" दायराको ठेगाना निर्दिष्ट गर्नुहोस्, जहाँ मासिक रकम सेल बिना स्थित छ, जसको डेटा गणना गरिनुपर्दछ।
फिल्डमा "अन्तराल" स्मोथ गर्ने तरिका प्रयोग गरेर प्रकृया मानहरूको अन्तराल निर्दिष्ट गर्नुहोस्। सुरू गर्न, चम्किलो मूल्य तीन महिनामा सेट गरौं, र यसैले आंकडा प्रविष्ट गर्नुहोस् "3".
फिल्डमा "आउटपुट स्पेसिङ" तपाईँले पानामा एक मनपर्ने रिक्त दायरा निर्दिष्ट गर्न आवश्यक छ, जहाँ प्रोसेस पछि डेटा प्रदर्शित हुनेछ, जुन आगत अन्तरालको भन्दा ठूलो कक्ष हुनुपर्छ।
अर्को बक्सको जाँच गर्नुहोस् "मानक त्रुटिहरू".
यदि आवश्यक छ भने, तपाईं अर्को बक्सको जाँच गर्न सक्नुहुनेछ "प्लटिङ" दृश्य प्रदर्शनको लागि, यद्यपि हाम्रो अवस्थामा यो आवश्यक छैन।
सबै सेटिङहरू बनाइएपछि बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। "ठीक".
कार्यक्रमले प्रशोधनको परिणाम देखाउँछ।
अब हामी दुई महिना को अवधि मा स्मोथिंग को लागी कार्यान्वयन गर्न को लागी को लागी हुनेछ कि कसरि परिणाम अधिक सही छ। यस उद्देश्यको लागि, हामी फेरि उपकरण चलाउछौँ। "औसत सारिँदै" विश्लेषण प्याकेज.
फिल्डमा "इनपुट अन्तराल" अघिल्लो अवस्थामा जस्तै समान मानहरू छोड्नुहोस्।
फिल्डमा "अन्तराल" नम्बर राख्नुहोस् "2".
फिल्डमा "आउटपुट स्पेसिङ" हामी नयाँ रिक्त दायराको ठेगाना निर्दिष्ट गर्दछौं, जुन, फेरि, आगत अन्तराल भन्दा एक सेल ठूलो हुनुपर्छ।
बाँकी सेटिङहरू अपरिवर्तित बाँकी छन्। त्यस पछि, बटनमा क्लिक गर्नुहोस् "ठीक".
यसपछि, कार्यक्रमले स्क्रीनमा परिणाम गणना र प्रदर्शन गर्दछ। दुई मोडेलहरू अझ सही छ भनेर निर्धारण गर्न, हामीले मानक त्रुटिहरूको तुलना गर्न आवश्यक छ। यस सूचक सानो, परिणामको शुद्धताको उच्च छ। तपाईंले देख्न सक्नुहुने, दुई महिनाको फिसिङको गणनामा मानक त्रुटिको सबै मानहरूका लागि3महिनाको लागि त्यही आंकडा भन्दा कम छ। यसकारण, डिसेम्बरको अनुमानित मूल्यलाई अन्तिम अवधिको लागि पर्ची विधि द्वारा गणना मान मान्न सकिन्छ। हाम्रो अवस्थामा यो मूल्य99 0.4 हजार रूबल छ।
विधि 2: AVERAGE प्रकार्य प्रयोग गर्नुहोस्
एक्सेलमा चलिरहेको औसत विधि प्रयोग गर्ने अर्को तरिका हो। यसलाई प्रयोग गर्नको लागि, तपाईलाई एक मानक प्रोग्राम प्रकार्य लागू गर्न आवश्यक छ, यसको आधारभूत उद्देश्य हाम्रो उद्देश्यको लागि हो AVERAGE। उदाहरणको लागि, हामी पहिलो मामलाको रूपमा उद्यम आयको समान तालिका प्रयोग गर्नेछौं।
अन्तिम पटक जस्तै, हामी एक स्लीड टाइम सीरीज बनाउन आवश्यक छ। तर यस समयमा कार्यहरू स्वचालित हुने छैनन्। नतिजाहरूको तुलना गर्न सक्षम गर्न प्रत्येक दुई र त्यसपछि तीन महिनाको लागि औसत मान गणना गर्नुहोस्।
सर्वप्रथम, हामी प्रकार्यको प्रयोग गरेर दुई अघिल्लो अवधिका लागि औसत मानहरूको गणना गर्दछौं AVERAGE। हामी यो केवल मार्च मा सुरू गर्न सक्दछौं, पछि पछि मितिहरूको लागि मानहरूमा ब्रेक छ।
मार्चको लागि पङ्क्तिमा खाली स्तम्भमा सेल चयन गर्नुहोस्। अर्को, प्रतिमामा क्लिक गर्नुहोस् "प्रकार्य घुसाउनुहोस्"जुन सूत्र पट्टी नजिकैको स्थित छ।
सक्रिय सञ्झ्याल प्रकार्य स्वामीहरू। वर्गमा "सांख्यिकीय" मूल्य खोज्दै "SRZNACH"यसलाई छान्नुहोस् र बटनमा क्लिक गर्नुहोस् "ठीक".
सञ्चालक तर्क सञ्झ्याल सुरु हुन्छ। AVERAGE। उनको सिंथ्याक्स निम्नानुसार छ:
= औसत (नम्बर 1; नम्बर 2; ...)
केवल एउटा तर्क आवश्यक छ।
हाम्रो अवस्थामा, फिल्डमा "नम्बर 1" हामीले दायराको लिङ्क प्रदान गर्नुपर्छ जहाँ दुई अघिल्लो अवधि (जनवरी र फेब्रुअरी) को लागि आय संकेत गरिएको छ। क्षेत्रमा कर्सर सेट गर्नुहोस् र स्तम्भमा पानामा सम्बन्धित कक्षहरू चयन गर्नुहोस् "आय"। त्यस पछि, बटनमा क्लिक गर्नुहोस् "ठीक".
तपाईंले देख्न सक्नु भएको छ, दुई अघिल्लो अवधिको लागि औसत गणनाको परिणाम कक्षमा प्रदर्शन गरिएको थियो। अवधिको सबै बाँकी महिनाहरूको लागि समान गणनाहरू गर्न, हामी यो सूत्रलाई अन्य कक्षहरूमा प्रतिलिपि गर्न आवश्यक छ। यो गर्नका लागि, हामी प्रकार्य समावेश कक्षको तलल्लो दायाँ कुनामा कर्सर बन्छौं। कर्सर भरिएको मार्करमा रूपान्तरण गरिएको छ, जुन क्रस जस्तो देखिन्छ। बायाँ माउस बटन थिच्नुहोस् र यसलाई स्तम्भको धेरै अन्त्यमा तान्नुहोस्।
हामी वर्षको अन्त्य भन्दा अघि अघिल्लो महिनाको औसत परिणामको गणना गर्दछौं।
अब अप्रिलको लागि अर्को खाली स्तम्भमा कक्ष चयन गर्नुहोस्। प्रकार्य तर्क विण्डोलाई कल गर्नुहोस् AVERAGE उस्तै तरिकाले वर्णन गरेको छ। फिल्डमा "नम्बर 1" स्तम्भमा कक्षहरूको समन्वय प्रविष्ट गर्नुहोस् "आय" जनवरीदेखि मार्च सम्म त्यसपछि बटनमा क्लिक गर्नुहोस् "ठीक".
भरण मार्कर प्रयोग गरेर, तल सूत्र तालिका कक्षमा सूत्रको प्रतिलिपि गर्नुहोस्।
त्यसोभए, हामीले मूल्यहरूको गणना गरेका छौं। अब, अघिल्लो समयमा जस्तै, हामी जान्न को लागी कुन प्रकारको विश्लेषण अझ राम्रो छ:2वा3महिनामा विरोधी-एलाइजिङ संग। यो गर्न, मानक विचलन र केहि अन्य संकेतकहरूको गणना गर्नुहोस्। पहिलो, हामी मानक एक्सेल प्रकार्य प्रयोग गरी निरपेक्ष विचलन गणना गर्दछौं। ABS, जो सकारात्मक वा नकारात्मक संख्याको सट्टामा उनीहरूको मोड्युल फर्काउँछ। यो मूल्य चयन गरिएको महिना र पूर्वानुमानको लागि वास्तविक राजस्व बीचको अंतर बराबर हुनेछ। मईको लागि पङ्क्तिमा अर्को खाली स्तम्भमा कर्सर सेट गर्नुहोस्। कल प्रकार्य जादूगर.
वर्गमा "गणितीय" प्रकार्यको नाम चयन गर्नुहोस् "Abs"। हामी बटन थिच्दछौं "ठीक".
प्रकार्य तर्क विण्डो सुरु हुन्छ। ABS। एकल क्षेत्रमा "नम्बर" स्तम्भहरूमा कक्षहरूको सामग्रीहरू बीचको फरक निर्दिष्ट गर्नुहोस् "आय" र "2 महिना" मईको लागि त्यसपछि बटनमा क्लिक गर्नुहोस् "ठीक".
भरण मार्कर प्रयोग गरेर, हामी यो सूत्र तालिकामा सबै पङ्क्तिहरू मा नवम्बर सम्म समावेश गर्दछौं।
हामीलाई प्रकार्य पहिल्यै परिचित प्रयोग गरी सम्पूर्ण अवधिको लागि निरपेक्ष विचलनको औसत मान गणना गर्नुहोस् AVERAGE.
हामी एक ही प्रक्रिया3क्रम को लागि एक स्लाइड को लागि निरपेक्ष विचलन गणना गर्न को लागि त्यहि प्रक्रिया गर्दछ। हामी पहिले प्रकार्य प्रयोग गर्दछौं ABS। केवल यो समय, हामी सेल आय को बीच वास्तविक आय र नियोजित,3महिना को लागि चलती औसत विधि को उपयोग गरेर गणना को बीच अंतर को विचार गर्छन।
अर्को, हामी प्रकार्य प्रयोग गरेर सबै निरपेक्ष विचलन डेटाको औसत गणना गर्दछौं AVERAGE.
अर्को चरण सापेक्ष विचलन गणना गर्न हो। यो वास्तविक संकेतक को निरपेक्ष विचलन को अनुपात को बराबर छ। नकारात्मक मानहरू जोगिनको लागि, हामी फेरि ओपरेटर प्रस्ताव को संभावनाहरु को प्रयोग ABS। यस समयमा यो प्रकार्य प्रयोग गर्दै, हामी चुने विचलन मान विभाजित औसत विधि2महिनाको लागि चयन गरिएको महिनाको लागि वास्तविक आय द्वारा विभाजित गर्दछ।
तर सापेक्ष विचलन सामान्यतया प्रतिशतको रूपमा प्रदर्शन गरिन्छ। यसैले, पानामा उपयुक्त दायरा चयन गर्नुहोस्, ट्याबमा जानुहोस् "गृह"जहाँ ब्लक उपकरणहरूमा "नम्बर" विशेष ढाँचा फिल्डमा, प्रतिशत ढाँचा सेट गर्नुहोस्। त्यस पछि, सापेक्ष विचलन गणनाको परिणाम प्रतिशतमा प्रदर्शन गरिएको छ।
हामी3महिना को लागि स्मोटिंग प्रयोग गरेर डाटा संग सम्बन्धी विचलन को गणना गर्न को लागी एक समान अपरेशन गर्छन। केवल यस मामलामा, लाभांशको रूपमा गणना गर्न, हामी तालिकाको अर्को स्तम्भ प्रयोग गर्छौं, जसको नाम छ "अवशेष। अफ (3 मी)"। त्यसपछि हामी प्रतिशतमा संख्यात्मक मानहरू अनुवाद गर्छौं।
त्यस पछि हामी यो उद्देश्यको लागि प्रकार्यको प्रयोग गर्नु अघि, दुवै स्तम्भहरूको सम्बन्धमा विचलित विचलनको लागि औसत मान गणना गर्दछौं AVERAGE। जब हामी प्रकार्यको तर्कको रूपमा प्रकार्यको लागि प्रतिशत मानहरू लिन्छौं, हामीलाई अतिरिक्त रूपान्तरणको आवश्यकता छैन। आउटपुटमा सञ्चालकले पहिले नै प्रतिशत स्वरूपमा परिणाम प्रदान गर्दछ।
अब हामी मानक विचलनको गणनामा आउँछौं। यो सूचकले हामीलाई दुई-तीन महिनाको लागि विरोधी-एलाइजिंग प्रयोग गर्दा गणनाको गुणलाई सीधा तुलना गर्न अनुमति दिन्छ। हाम्रो अवस्थामा, मानक विचलन वास्तविक राजस्वमा फरक फरक फरक वर्गको औसत वर्ग को बराबर र औसत हिसाबले महिनाको संख्यामा विभाजित हुन्छ। कार्यक्रममा गणना गणना गर्नको लागि, हामीले विशेष गरी थुप्रै प्रकार्यहरू प्रयोग गर्नुपर्छ ROOT, SUMMKRAVN र खाता। उदाहरणको लागि, मई मा दुई महिनाको लागि स्मोनेस लाइन प्रयोग गर्दा मानक विचलनको गणना गर्दा, हाम्रा सूत्रमा निम्न सूत्र लागू गरिनेछ:
= जट (धूमराव (बी 6: बी 12; सी 6: सी 12) / खाता (बी 6: बी 12))
हामी यसलाई भरिएको मार्कर मार्फत मानक विचलनको गणनाको साथ स्तम्भको अन्य कक्षहरूमा प्रतिलिपि बनाउँदछौं।
हामी3महिनाको लागि हिड्ने औसतको लागि मानक विचलन गणना गर्नको लागि समान अपरेशन गर्छौं।
त्यस पछि, हामी यी संकेतकहरूको लागि सम्पूर्ण अवधिको औसत मूल्य गणना गर्दछ, प्रकार्य आवेदन गर्दछ AVERAGE.
निरपेक्ष विचलन, सापेक्ष विचलन र मानक विचलन संकेतक प्रयोग गरेर2र3महिनामा स्मोनेसको साथ हिँड्ने औसत विधि प्रयोग गरेर गणनाको तुलना बनाइयो, हामी सुरक्षित रूपमा भन्न सक्छौं कि दुई महिनाले अझ राम्रो विश्वसनीय परिणाम दिन्छ जसले तीन महिनाको प्रयोग गरिरहेको छ। यो तथ्यले संकेत गरेको छ कि दुई महिना चलिरहेको औसतको लागि माथिका संकेतकहरू तीन महिना भन्दा कम छन्।
यसकारण, डिसेम्बरमा कम्पनीको अनुमानित आय99 0.4 हजार रूबल हुनेछ। तपाईले देख्न सक्नु भएको छ, यो मूल्य हामीले प्राप्त गरेको जस्तै जस्तै हो, उपकरणहरू प्रयोग गरेर गणना गर्न विश्लेषण प्याकेज.
पाठ: एक्सेल प्रकार्य विजार्ड
हामीले अनुमानित औसत विधि प्रयोग गरेर दुई तरिकामा भविष्यवाणी गरेका छौं। तपाईंले देख्न सक्नु भएको छ, यो प्रक्रिया उपकरणहरू प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ। विश्लेषण प्याकेज। तथापि, केही प्रयोगकर्ताहरूले स्वचालित रूपमा स्वचालित गणनामा भरोसा गर्दैन र गणनाको लागि प्रकार्य प्रयोग गर्न मन पराउँछन्। AVERAGE र सम्बन्धित अपरेटरहरू सबैभन्दा विश्वसनीय विकल्प प्रमाणित गर्न। यद्यपि, यदि सबै कुरा सही भएमा, आउटपुटमा गणनाको नतिजा पूर्ण रूपमा एकै ठाडो हुनुपर्छ।
भिडियो हेर्नुहोस्: How to createanew Apple ID on your iPhone Easiest way to create an Apple ID without credit card (सेप्टेम्बर 2019).
https://termotools.com ne.termotools.com © आईओएस 2019